Na-enyere aka ịhọrọ akara ngosi LibreOffice site na iji nyocha | Site na Linux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Aplicaciones, Ndị ọzọ
O yiri ka ha na-echefu banyere ọrụ nhazi na FreeOffice, ọ bụkwa ya mere ha ji mee nyocha iji nyere ha aka ịghọta ogo nke akara ngosi eji na nke a Office Suite. Ana m ekwuputa na enwere akara ngosi ndi amaghi ebe ha na aga
Ọ bụrụ n'ịchọrọ inyere aka na nyocha ahụ, ana m ahapụ njikọ ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Na-enyere aka ịhọrọ akara ngosi LibreOffice site na iji nyocha
Ọ dị mma na ha na-amalite ịgbanwe nka nke thelọ Ọrụ Libre, n'agbanyeghị na ha dị ezigbo mma ma na-arụ ọrụ, interface ahụ jọgburu onwe ya, ụbọchị ọzọ echere m na m hụrụ mgbanwe na interface Libre Office na blog a ma eziokwu bụ na ọ dị ezigbo mma.
M na-aza, ọ bụ iji nyochaa ụdị akara ngosi, ọ bụghị ịgbanwe ihe osise ... ọgụgụ isi ọgụgụ, biko ahapụla m !!
Ọfọn, ọ bụghị kpọmkwem iji nye anyị nhọrọ mana ịmara ma ọ bụrụ na anyị ejiri akara ngosi mara n'onwe ha na eziokwu ahụ bụ na m furu efu n'otu 3 ma ọ bụ 4 yana etinyekwara m akara ngosi ahụ maka ihe dị iche iche dị ka 2 ma ọ bụ 3 ugboro ka akara ngosi ahụ abụghị nnọọ kensinammuo ikwu.
Nchọpụta nhọrọ akara akara adịghị mma. Echere m na ọ ga-abụ ngwungwu akara ngosi, anyị ga-ahọrọ otu / s na onye nwere ọtụtụ ntuli aka ga-anọgide, mana mba ... ịhọrọ akara ngosi maka ọrụ ahụ bụ ihe nzuzu ebe ọ bụ na edoziri ya, ikwu nke kachasị.
Akara ngosi nke m chere na ha kwesiri ịgbanwe bụ floppy disk ha ji echekwa, maka na ọgbọ ọhụụ amachaghị banyere ya.
N'oge na-adịbeghị anya, otu nwoke jụrụ m otu esi echekwa ọrụ ya wee gwa ya, pịa na akara ngosi "disk", mgbe obere oge gasịrị, ọ jụrụ m ọzọ, azakwa m, pịa akara ngosi diski. M na-eche ihe bụ floppy disk icon?
Echere m nanị akara ngosi ahụ. Floppy disk anaghịzi anọchite anya ya. Ihe ọzọ m chọpụtara na nyocha ahụ bụ na enweghị nhọrọ. Nke ahụ bụ, ha kwesịrị itinye ọtụtụ akara ngosi, dịka ọmụmaatụ, PASTE wee họrọ nke kachasị amasị gị. Dị ka ọ dị, ọ dị ka egwuregwu nke ịkụ.
Na njedebe nke ule ahụ, akara ngosi ajuju gbasara afọ gị, ha na-echebara akụkụ ahụ echiche.
Ee, mana olee uru ọ bara. Iji maa atụ, kedụ nhọrọ ndị na - abụghị diski diski nwere ike iji “Chekwaa faịlị”? Naanị otu akara ngosi bụ azịza ya.
N'ime ule ahụ ọ na-egosi na ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta akara ngosi, dịka ọmụmaatụ, "chekwaa", pịa nke na-esote ma ahọrọla nke ọ bụla. N'okwu ahụ, data ahụ ga-egosi na, dịka ọmụmaatụ, ndị na-erubeghị afọ iri abụọ anaghị achọpụta diski floppy dị ka akara ngosi nchekwa, nke ga-eduga na nhazigharị nke akara ngosi m chere.
Enwekwaghị m nkwanye ùgwù maka ihe mere anyị ji nwee obi ụtọ
Ugbu a ka m na-eche banyere ya, akpọrọ m diski diski asị, ha na-efunahụ ya mgbe niile, ihe niile efunahụ m.
Kpofuo ICON !!!!!!!
Lee ka LibreOffice si dị mma na-eburu n'uche ndị ọrụ, ọ ga-adị mma nke ukwuu ...
Na-akpachapụ anya na nyocha ahụ n'echiche m ... ¬_¬
Obere nnyocha m chere. Na agba nke atọ m hapụrụ. Gụ post m chere na onye ọrụ nwere ike ịhọrọ otu akara ngosi akara site na ọtụtụ.
Otu ihe ahụ mere m, echere m na anyị nwere ike ịhọrọ mkpọ akara ngosi ọzọ ma ọ bụ ihe yiri ya. O yikwara m ihe iju anya, mana agbanyechara m.
Ha emeela nyocha iji họrọ LibreOffice 3.6 ihuenyo ụlọ ma ọ bụrụ na m cheta n'ụzọ ziri ezi, ọ gaghị abụ nnukwu ihe mana anaghị m ahụ ya n'efu.
Mana hey ... eaa !! Oxygen na-aga ile anya na KDE SC 😀
Anyị bụ abụọ ¬ ¬ M na-ekwu na ha kwesịrị iji Faenza na Faenza Darkest karị, dabere na isiokwu. Ma ọ bụ ka mma, were isiokwu gtk / qt.
Achọpụtara m na ọ bụ ihe nzuzu, ebe ọ bụ naanị akara ngosi LibreOffice maka KDE pụtara ……. Onweghi akara ngosi ma ọ bụ echiche ọhụụ maka LibreOffice ka egosiri, enwere ọtụtụ ndị omenkà kere akara ngosi maka LibreOfice ……
Zaghachi Mariano Gaudix
Amalitela m iji okwu Calligra, nke na-esighi ike dị ka ọfịs ọfụma mana maka ihe m na-eme, ọ karịrị ezuru. Anaghị m eji libre office ka chakra na-ada ada ma ọ bụ na-efu ihe.
Ọ dị mma na ị na-eji nnukwu ụlọ dịka Calligra, achọkwara m ịnwale ya
Echekwara m na ha ga-enye ịhọrọ n'etiti ọtụtụ akara ngosi maka ọrụ, mana ọ dị m ka ọ bụ egwuregwu nke ịkọ akara ngosi nke ọrụ ahụ.
Banyere ihe ndị "ochie" akara ngosi nke floppy disk ọ ga-ekwe omume na ha ziri ezi na ọ ga-emelite site na akara ngosi nke "mgbasa ozi" nke nwere ike iwepụ na akara USB.
Ikekwe n'ụzọ ahụ ọ dị mma karịa.
Enwere m mmasị na isonye, ​​ọ bụghị votu ịhọrọ akara ngosi ka mma "mara mma", ọ bụ ezigbo nnwale ojiji nke ga-abụ ihe ndabere maka imewe UI. Olileanya ndị ọzọ free software oru ngo ga-agụnye ọrụ na ụdị ule, bụ itinye aka na a obere na mmepe, ma naanị dị ka a Guinea ezi pig
Nye m, ọ dị m ka ọ bụ nyocha nke uche iji hụ ma ọ bụrụ na ịkọtara ihe oyiyi ahụ nke ọma na leta, ebe ọ bụ na ịhọrọ atụmatụ ị ga-achọ nhọrọ ndị ọzọ na onyonyo maka ime ihe, na mgbakwunye na nke ikpeazụ m chọrọ itinye Linux (Xfce) = P
Enwere m olileanya na nyocha a na-arụ ọrụ maka ụmụ okorobịa ndị a na-arụ ọrụ dị ukwuu na ụlọ ndị na-egbu egbu, naanị m wụnye ụdị kachasị ọhụrụ na windo (n'ọfịs, echela ihe ọjọọ) ọ naghị ajụ MS Office 2010 maka ihe ọ bụla.
A ga-agbanwe akara ngosi…. ma ị nwere ike ịkọwapụta isiokwu n’onwe gị. Enwere m akara ngosi elementrị. Nsogbu a abughi akara ngosi bu ezie na etinyego…. Nwere ike ịchọ ndị na-anọpụ iche, ndị na-anọghị na distro nke arụnyere ya (ụdị ihe atụ 3 nke gnome) ma ọ bụ mee ụdị gnome / tango / elementrị + KDE dị iche iche, dịka ebe ndị ọzọ na-anọchite anya ya. Mana ihe ikwesiri igbanwe bụ gburugburu nke ogwe na ịhazi akara ngosi maka ihe ọgbara ọhụụ (nnukwu akara ngosi, meziwanye ọdịda, wdg). Oge na oge. Ruo ugbu a, ọ dị ka ha gbalịrị imeziwanye arụmọrụ ma enwere m ike ịsị na ọ bụ ngwa ngwa ngwa ngwa ọ ga-emepe ma e jiri ya tụnyere ụdị abụọ ma ọ bụ atọ dị n’azụ.
Rịba ama ndị nchịkwa: "Dezie okwu" agaghị abụ ezigbo echiche. Mgbe ụfọdụ m na-atụ uche ihie ụzọ ma enweghị m ike ịme ihe ọ bụla iji dozie ya.
Enwere ihe pụtara ìhè, nkezi afọ nke otu ndị na-emepụta ihe karịrị afọ iri anọ ... N'ọnọdụ ọ bụla, nkwanye m ga-abụ na tupu ha echegbu onwe ha nke ukwuu maka imepụta akara ngosi, ha na-eleba anya na -eme ka ọrụ nke ngwugwu ahụ, nke mere, dịka ọmụmaatụ , igbupita site na ibe web ma banye na akwukwo adighi-emekpa ahuhu ndi China.
ỌHR to na LibreOffice maka iwere ọha na eze.
Achọrọ m ka ha mee ma gbasoo ụzọ LibreOffice
yabụ ọ bụrụ Ọ ga-abụ ỌHA
M rutere na Ọgwụgwụ !!!!
Ha wee kelee m !!!
Ọ na-adị m ka ọ dị ukwuu ịmekọrịta na OpenSurce!
(Ọ bụrụ na ejiri m MinosoftOfise, agaghị m anwa iche echiche inye aka)
Ana m eji akara ngosi "Tango" oge niile ma ọ bụrụ na ị tinye akara ngosi ndị a na-etinyekarị na LibreOffice (KDE), ebe ọ bụ na ụfọdụ n'ime ha amaghị m ebe m ga-enweta ha.
Ha gwara m na ha ga-aga n'ihu na eserese eserese eserese… .. Enwere m olile anya na ha nwere ike ịme ka eserese eserese ahụ nke ọma maka GNU / LINUX… na Borland c ++ VCL Ọba akwụkwọ na wijetị ha adịghị mma eziokwu the nakwa na e mere ha maka WINDOWS yo ..yo ghaghi ịgụ LOTUS koodu iji dozie ndakọrịta nke ụfọdụ wijetị. Yabụ na ha dị mma karịa na GNU / LINUX.